Vpn ဆိုတာ .... — MYSTERY ZILLION
Vpn ဆိုတာ ....
August 2008 edited May 2010 in Networking
အားလုံးပဲခင်ဗျာ။ VPN ဆိုတာကို Virtual Private Network ဆိုတာလောက်နဲ့။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး နဲ့တစ်လုံး Remote လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလောက်လေးတော့ကြားဖူးပါတယ်။ MZ မှ အကို၊ အမများနဲ့ အပေါင်းအသင်းအားလုံးမှ တတ်နိုင်သလောက်လေး ရှင်းလင်း သင်ကြား ပေးစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော် တကယ့်ကို လိုလိုချင်ချင်နဲ့သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ကိုစေတန်ကြီးခင်ဗျာ.... အားလုံးကို တိုက်တွန်းပေးစေလို ပါတယ်။ နားလည်အလွယ်ဆုံး ရှင်းပြပေးကြပါခင်ဗျာ။
(အားလုံးပဲခင်ဗျာ...တကယ့်ကိုသိချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးကြပါ။)
VPN ဆိုတာ virtual private network ပါ .... သူက ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတော့ office ၁ခုနဲ့ တခု က တစ်ခုက မနလေးက တစ်ခုက ရန်ကုန်က ........ အဲဒီတော့ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု က network မတူဘူး ...... အဲဒီတော့ Data share လုပ်မယ် ..... Yangon နဲ့ Mandalay ရုံးနှစ်ခုကို Network တစ်ခုတည်းလုပ်တဲ့အခါကြရင် ..... သုံးပါတယ် ။...... VPN ( secure ) ပါတယ်လေပိုပြီးစိတ်ချရတယ် .... သူက သူဟာသူ tuneel တစ်ခုဆောက်ပြီး Data ကို ရှယ်လုပ်တာ ..... ပိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့ကွာ .... သူမှာကိုပဲ pptp ရယ် L2tp ရယ်ဆိုပြီးပါသေးတယ် ..... L2tp ကတော့ ပိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့ကွာ ... သူက certificate နဲ့သွားတာလားမသိဘူး ...... အခု MPT ကသုံးနေတဲ့ ADSL အသစ်ကလည်း VPN နဲ့ဆင်တယ် ... server ကိုလှမ်းခေါ်တယ် .... server ကနေ့ username နဲ့ password စစ်ပြီး DHCP Ip ပြန်ချပေးတယ် ..... အဲ့ဒီတော့ MPT က DSL router လဲလို့ရတယ် ..... bagan ကတော့ မလွယ်ဘူး .... နောက်မှ ဆက်ပြောမယ် အခုတော့ ကြူလိုက်ဦးမယ်
အခုလိုပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုသိချင်တာက VPN ကို သုံးချင်ရင် (Bagan) ဆိုရင် သူတို့ကို VPN သုံးမယ့်အရောင်းကို လျှောက်ရမယ်။ ပြီးတော့မှ သူတို့က ဥပမာ - ရန်ကုန် မှ မနလေး ကို Route နိုင်အောင်ပြန်ချပေးတာလို့ကြားဖူးတယ်။ နောက်တခုက အဲ့ဒီလို ပုဂံမပါပဲနဲ့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်အခြားဆော်ဖ်၀ဲတစ်ခု ကိုသုံးပြီး Remote လုပ်လို့ရနိုင်မလား။ Logme In တော့ကြားဖူးပါရဲ့။ ဒါပေမယ့်လေ...အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် သေချာမစမ်းဖြစ်ဘူး။ (Connection ကြောင့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အဟီး.....)
ပြောရင်လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပေးပါလား။ ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုရတာလဲ။ ဆောဖ်၀ဲလား Web Version လား။ ကျွန်တော်ကညံ့လို့ပါခင်ဗျာ။ အရိပ်ပြရင်အကောင်မမြင်တတ်လို့ပါ။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။
ကျွန်တော် ခဏနေရင် Detail ရေးပေးပါမယ်.....
RRAS ဆိုတာ routing and remote access ကိုပြောတာပါ ..... 2003 server မှာပါပါတယ် ......
အခုတော့ အဲလောက်ပဲရေးပေးအုံးမယ်ဗျာ ... နော်
ကို Cyberhacker ရေ ကျွှန်တော်လဲ VPN အကြောင်းကို စိတ်၀င်းစားပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် အသေးစိတ် ရေစေချင်ပါတယ်...။။:biggrin::biggrin:
အောက်က Link လေးထဲမှာ VPN configuration (server site) ကို ပုံနဲ့တစ်ကွ ရှင်းပြထားပါတယ်
PrettyKid wrote: »
ကျနော် လဲသိချင်တယ်ဗျာ။iPhone က VPN ကိုသုံးနည်းလေးလဲပြောပြပါဦး။
iphone ထဲမှာ vpn setup လုပ်မယ်ဆိုရင်...........
Settings > General > Network > VPN> Add vpn configuration> L2TP, PPTP, IPsec ရွေးချယ်ပါ။
ဒီမှာ iphone ကို special ကလိဖို့ အဲ နှံ့နှံ့စပ်စပ် သုံးတက်ဖို့ manual ပါ............
Windows XP မှာ VPN server connection (PPTP) တစ်ခု တည်ဆောက်ပုံလေးပါ..............
ကျွန်တော်တို့ network တည်ဆောက်ပုံက အောက်ပါအတိုင်း ဆိုကြပါစို့..
VPN server က router အနောက်ဘက်မှာ ရှိနေပါတယ်.... ကျွန်တော် တို့ router ကို linksys သုံးထားပါတယ်.... VPN အတွက် PPTP port no. ကို router ထဲမှာ forward လုပ်ပါမယ်.. အောက်က အတိုင်းပေ့ါ.....
configuration စလုပ်ကြည့်ရအောင် run>ncpa.cpl>creat new connection
next > Choose accept incomming connection > Next > Next > Allow virtual private connection > Next > client အတွက် သက်မှတ်ထားတဲ့ user account ကို ရွေးပေးပါ > Next > TCP/IP ကတော့မဖြစ်မနေ ရွေးပေးရပါမယ်. file sharing သုံးချင်ရင်တော့ file and printer sharing...... ပါရွေးနိုင်ပါတယ် > Next
run> ncpa.cpl ကိုပြန်သွားပါ Incomming Connection ဆိုတဲ့ icon အသစ်လေး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်...
server ဘက် configuration ပြီးသွားပါပြီ......
Prettykid ရေ TCP/IP က Server ရဲ့ IP Address လား။ဒါမှမဟုတ် ကိုပေးချင်တဲ့ IPAddress လား။
IP Address ထည့်တဲ့နေရာ မရှင်းဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ် သိတဲ့ သူများလည်း ဖြေပေးကြပါအုံးဗျာ။
ISA မှာ vpn install လုပ်ပုံလေးမျပါအုံး ကျွန်တော်လုပ်တာ window specifie user မှာ dhcp admin နဲ့dhcp user မပေါဘူးၿဖစ်နေတယ်